အောငျမွငျတဲ့သူတှေ အိပျရာမဝငျခငျမှာ လုပျလရှေိ့တဲ့ အရာ(၉)ခု - ONE DAILY MEDIA
မိတျဆှေ အိပျရာမဝငျခငျ လုပျလရှေိ့တဲ့အရာတှထေဲမှာ အခုဖျောပွထားတဲ့ အောငျမွငျသူ‌တှေ အိပျရာမဝငျခငျ လုပျ‌လရှေိ့တဲ့အခကျြတှထေဲက ဘယျအခကျြတှကေို လုပျလရှေိ့ပါသလဲ? အောငျမွငျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈဖို့ အောငျမွငျသူတှေ အိပျရာမဝငျခငျမှာ လုပျလရှေိ့တဲ့အခကျြ တှကေို ပွောပွခငျြပါတယျ။
အောငျမွငျတဲ့သူ အမြားစုဟာ မအိပျခငျမှာ စာအုပျစာပေ ဖတျရှုကွပါတယျ။ သူတို့တှဟော စာအုပျတှမှေ သတငျး အခကျြအလကျ၊ ဗဟုသုတတှကေို နစေ့ဉျဘဝမှာ ပို‌မို ကောငျးမှနျတဲ့ တီထှငျနိုငျစှမျးနဲ့ ဘဝနထေိုငျမှုအတှကျ တနျဖိုး ရှိစှာ ပွနျလညျအသုံးခကြွပါတယျ။
(၂) တဈနတေ့ာ လုပျဆောငျရမယျ့ အရာမြားကို ကွိုတငျ ပွီးခရြေးခွငျး
အောငျမွငျတဲ့သူတှဟော ညမအိပျခငျမှာ နောကျတဈနေ့ အတှကျ လုပျရမယျ့ အရာအားလုံးကို အခြိနျနဲ့ စနဈတကြ စာရငျးခရြေးပါတယျ။ အဲ့လိုမှသာ တဈနတေ့ာအတှငျး ကိုယျလုပျရမယျ့ အရာအားလုံးကို အစီအစဉျတကြ ပွီး မွောကျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
(၃) မိသားစုကို အခြိနျပေးခွငျး
လူတိုငျးဟာ မိမိရဲ့ အိမျထောငျဖကျ၊ သားသမီး၊ မိသားစု ဝငျတှနေဲ့ အခြိနျတဈခုကုနျဆုံးဖို့ဟာ အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ အောငျမွငျသူ‌တှဟော ဘယျလောကျပဲ အလုပျမြား မြား မိသားစုဝငျတှနေဲ့ စကားပွောပွီး နှေးထှေးတဲ့ အခြိနျ တဈခုကိုဖနျတီးကာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ တဈနတေ့ာ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အရာတှကေို ဖလှယျကွပါတယျ။ အဲ့လို အခြိနျပေးခွငျးဟာ မိသားစုဝငျအခငျြးခငျြး စိတျခငျြးပိုပွီး နီးစပျနားလညျနိုငျဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဖွဈပါတယျ။
(၄) ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ တဈနတေ့ာကို ပွနျလညျတှေးတော သုံးသပျခွငျး
အောငျမွငျတဲ့သူတှဟော မအိပျစကျခငျမှာ သူတို့တဈနေ့ တာကို ပွနျမွငျယောငျပွီး ဘာတှလေုပျခဲ့လဲ? ဒါမှမဟုတျ ကိုယျကြေးဇူးတငျပွီး အသိမှတျပွုစရာ ကောငျးတဲ့ အဖွဈ အပကျြ (၃)ခုကို ပွနျပွီး အမှတျရပါတယျ။ အခြိနျခဏ လောကျပေးပွီး တဈနတေ့ာလုံး ပွီးဆုံးခဲ့တဲ့ ကောငျးတဲ့အရာ လေးတှကေို ပွနျပွီးတှေးတောခွငျးဟာ အကောငျးမွငျတတျ တဲ့ စိတျနဲ့ အသိအမှတျပွု ကြေးဇူးတငျတတျတဲ့ စိတျထား ကောငျး တဈခုကို ဖနျတီးပေးပါတယျ။
အောငျမွငျတဲ့သူ အမြားစုဟာ ညအိပျရာမဝငျခငျမှာ တရားထိုငျဖို့အတှကျ အနညျးဆုံး (၁၀) မိနဈခနျ့ အခြိနျပေးပါတယျ။ အဲ့ဒါဟာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ တဈနတေ့ာ အမောတှကေို အပနျးဖွဖေို့နဲ့ စိတျကို ငွိမျသကျစဖေို့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
(၆) လုံလောကျတဲ့ အိပျခြိနျပေးခွငျး
အရမျးအလုပျမြားတဲ့ သူတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ အိပျ‌ခြိနျထိ‌တိုငျအောငျ အလုပျမပွီးပွတျနိုငျဘဲ အိပျရေးပကျြတဲ့ ပွဿနာနဲ့ ရငျဆိုငျရပါတယျ။ အောငျမွငျတဲ့သူတှဟော အိပျခြိနျလုံလောကျစှာ ရရှိဖို့ကို ဦးစားပေးပွီး လုပျပါတယျ။ လူတှေ ညဘကျ အခြိနျလှနျတဲ့ အထိနပွေီး မနကျအိပျယာ မထတာမြိုးကို ရှောငျကဉျြပါတယျ။
(၇) အိပျရာဝငျတဲ့အခြိနျမှာ အလုပျနှငျ့ ပိုငျးဖွတျခွငျး
အမှနျတကယျ အောငျမွငျတဲ့သူတှကေ ညအိပျရာဝငျခြိနျမှာ အလုပျနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ e-mail တှေ ကွညျ့တာမြိုး၊ အလုပျ ကိစ်စတှေ ဆကျလုပျနတောမြိုးကို ရှောငျပါတယျ။ လုပျငနျး ခှငျအတှငျးက ပွဿနာ အကွောငျးအရာတှအေပျေါမှာ လညျး စိတျမပူပနျဘဲ အိပျရာဝငျပါတယျ။
(၈) အကောငျးမွငျစိတျနဲ့ စိတျကိုရှငျးလငျးပွီး အိပျစကျခွငျး
အဆငျမပွတေဲ့ အရာတှနေဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရလို့ စိတျညဈစရာ အတှေးတှေ တှေးဖို့က အရမျးလှယျကူပါတယျ။ အောငျမွငျ တဲ့သူတှဟော ဘယျလိုပဲ မကောငျးတဲ့အရာတှေ ကွုံတှခေဲ့ လညျး အိပျရေးပကျြခံပွီး စိတျဆငျးရဲနတောမြိုးကို ရှောငျ ပါတယျ။ ပွီးသှားတဲ့အရာတှေ‌အပျေါ စိတျညဈနတောဟာ စိတျဖိစီးမှုတှပေဲ ပိုပွီးဖွဈစလေို့ပါ။
(၉) မနကျဖွနျရဲ့ အောငျမွငျမှုပုံရိပျကို မွငျယောငျခွငျး
အောငျမွငျတဲ့သူတှဟော မအိပျခငျ မိနဈအနညျးငယျ အခြိနျယူပွီး ရှဆေ့ကျလုပျဆောငျရမယျ့ အလုပျတှေ အောငျမွငျစှာ ပွီးမွောကျဖို့ မြှျောမှနျးခကျြနဲ့ ယုံကွညျမှု တဈခုကို ခမြှတျပါတယျ။
အောင်မြင်တဲ့သူတွေ အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ လုပ်လေ့ရှိသော အရာ(၉)ခု
မိတ်ဆွေ အိပ်ရာမဝင်ခင် လုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာတွေထဲမှာ အခုဖော်ပြထားတဲ့ အောင်မြင်သူ‌တွေ အိပ်ရာမဝင်ခင် လုပ်‌လေ့ရှိတဲ့အချက်တွေထဲက ဘယ်အချက်တွေကို လုပ်လေ့ရှိပါသလဲ? အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အောင်မြင်သူတွေ အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ လုပ်လေ့ရှိတဲ့အချက် တွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့သူ အများစုဟာ မအိပ်ခင်မှာ စာအုပ်စာပေ ဖတ်ရှုကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ စာအုပ်တွေမှ သတင်း အချက်အလက်၊ ဗဟုသုတတွေကို နေ့စဉ်ဘဝမှာ ပို‌မို ကောင်းမွန်တဲ့ တီထွင်နိုင်စွမ်းနဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုအတွက် တန်ဖိုး ရှိစွာ ပြန်လည်အသုံးချကြပါတယ်။
(၂) တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာများကို ကြိုတင် ပြီးချရေးခြင်း
အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာ ညမအိပ်ခင်မှာ နောက်တစ်နေ့ အတွက် လုပ်ရမယ့် အရာအားလုံးကို အချိန်နဲ့ စနစ်တကျ စာရင်းချရေးပါတယ်။ အဲ့လိုမှသာ တစ်နေ့တာအတွင်း ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အရာအားလုံးကို အစီအစဉ်တကျ ပြီး မြောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) မိသားစုကို အချိန်ပေးခြင်း
လူတိုင်းဟာ မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်၊ သားသမီး၊ မိသားစု ဝင်တွေနဲ့ အချိန်တစ်ခုကုန်ဆုံးဖို့ဟာ အရမ်းအရေးကြီးပါ တယ်။ အောင်မြင်သူ‌တွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်များ များ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ စကားပြောပြီး နွေးထွေးတဲ့ အချိန် တစ်ခုကိုဖန်တီးကာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တစ်နေ့တာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အရာတွေကို ဖလှယ်ကြပါတယ်။ အဲ့လို အချိန်ပေးခြင်းဟာ မိသားစုဝင်အချင်းချင်း စိတ်ချင်းပိုပြီး နီးစပ်နားလည်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ တစ်နေ့တာကို ပြန်လည်တွေးတော သုံးသပ်ခြင်းေ\_
အာင်မြင်တဲ့သူတွေဟာ မအိပ်စက်ခင်မှာ သူတို့တစ်နေ့ တာကို ပြန်မြင်ယောင်ပြီး ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ? ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပြီး အသိမှတ်ပြုစရာ ကောင်းတဲ့ အဖြစ် အပျက် (၃)ခုကို ပြန်ပြီး အမှတ်ရပါတယ်။ အချိန်ခဏ လောက်ပေးပြီး တစ်နေ့တာလုံး ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ ကောင်းတဲ့အရာ လေးတွေကို ပြန်ပြီးတွေးတောခြင်းဟာ အကောင်းမြင်တတ် တဲ့ စိတ်နဲ့ အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ စိတ်ထား ကောင်း တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့သူ အများစုဟာ ညအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ တရားထိုင်ဖို့အတွက် အနည်းဆုံး (၁၀) မိနစ်ခန့် အချိန်ပေး ပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်နေ့တာ အမောတွေကို အပန်းဖြေဖို့နဲ့ စိတ်ကို ငြိမ်သက်စေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်း လမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၆) လုံလောက်တဲ့ အိပ်ချိန်ပေးခြင်း
အရမ်းအလုပ်များတဲ့ သူတွေဟာ များသောအားဖြင့် အိပ်‌ချိန်ထိ‌တိုင်အောင် အလုပ်မပြီးပြတ်နိုင်ဘဲ အိပ်ရေးပျက် တဲ့ ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာ အိပ်ချိန်လုံလောက်စွာ ရရှိဖို့ကို ဦးစားပေးပြီး လုပ်ပါတယ်။ လူတွေ ညဘက် အချိန်လွန်တဲ့ အထိနေပြီး မနက်အိပ်ယာ မထတာမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်ပါတယ်။
(၇) အိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်မှာ အလုပ်နှင့် ပိုင်းဖြတ်ခြင်း
အမှန်တကယ် အောင်မြင်တဲ့သူတွေက ညအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ အလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ e-mail တွေ ကြည့်တာမျိုး၊ အလုပ် ကိစ္စတွေ ဆက်လုပ်နေတာမျိုးကို ရှောင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း ခွင်အတွင်းက ပြဿနာ အကြောင်းအရာတွေအပေါ်မှာ လည်း စိတ်မပူပန်ဘဲ အိပ်ရာဝင်ပါတယ်။
(၈) အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ စိတ်ကိုရှင်းလင်းပြီး အိပ်စက်ခြင်း
အဆင်မပြေတဲ့ အရာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ စိတ်ညစ်စရာ အတွေးတွေ တွေးဖို့က အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ အောင်မြင် တဲ့သူတွေဟာ ဘယ်လိုပဲ မကောင်းတဲ့အရာတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ လည်း အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေတာမျိုးကို ရှောင် ပါတယ်။ ပြီးသွားတဲ့အရာတွေ‌အပေါ် စိတ်ညစ်နေတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေပဲ ပိုပြီးဖြစ်စေလို့ပါ။
(၉) မနက်ဖြန်ရဲ့ အောင်မြင်မှုပုံရိပ်ကို မြင်ယောင်ခြင်း
အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာ မအိပ်ခင် မိနစ်အနည်းငယ် အချိန်ယူပြီး ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်တွေ အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ဖို့ မျှော်မှန်းချက်နဲ့ ယုံကြည်မှု တစ်ခုကို ချမှတ်ပါတယ်။